[Thursday, February 23rd, 12] :: ''Waa in ay Somaliland iyo TFG wada hadlaan '' Ismaaciil Omar Geele
Akhriska hoosta ka soo bilow hadii aad rabto in aad wax ka ogaato cidii shirka ka hadashay iyo wixii ay yidhaahdeen ilaa saaka. waxaa qoraalka diyaariyay BBC Somali
1656 Hadda waxaa mar labaad lagu soo celiyay shirkii saxaafadeed ee lagu soo geba gebeeyay shirka London ee Somalia.
1654 Shirka saxaafadeed wuxuu ka dhacay Xafiiska Arrimaha Dibadda ee UK.
1653 Khudbadihii maanta ka daawo lifaaqan. http://www.youtube.com/playlist?list=PL355FA9D26E47A9B0
1652 Xoghayaha Guud ee Qm iyo Raisal Wasaaraha Soomaaliya waxay David Cameron uga mahad celiyeen hoggaanka uu muujiyay iyo marti gelinta shirkan uu isagu lahaa hindisihiisa.
1651 Shirkii saxaafadeed waa la soo geba gebeeyay.
1647 Saddex ilaa afar bilood ee soo socda aad ayay ugu muhiim yihiin ayuu yiri hirgelinta waxyaabaha shirka ka soo baxay.
1645 Waxaa ka jawaabaya Xoghayaha Guud ee QM, Ban ki-Moon.
1644 Su'aasha ugu dambeeyay ayaa la siiyay Swiss TV.
1642 Shirka soo socda ee Istanbul isaguna waa in aan iska kaashannaa ayuu yiri in aan hore ugu sii tallaabsanno horumarka la gaaray.
1641 Turkey kaalin muhiim ah ayay ka qaadatay hawlaha samafalka SOomaaliya. Waanan u sheegaa madaxdooda. Ayuu yiri David Cameron.1640 Xoghayayaasha Guud ee QM iyo Midowga Afrika ayaa iyaguna ka qeyb qaadanaya shirka saxaafadeed.
1637 Su'aaluhu waxay inta badan ku socdaan labada Ra'iisal Wasaare ee UK iyo Soomaaliya, hase yeeshee wey jiraan su'aalo la weydiiyay Midowga Afrika.
1636 Cabdiweli wuxuu ku jawaabay in aanuu dooneyn in dad aan dembi lahayn la dilo.
1635 Weriye ka socda Bar kulan ee QM ayaa suaa' weydiiyay. Ku saabsan cidda ka ms'uul ah duullaanka cirka ciddii ku dhimata?
1634 Ra'iisal Wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay in uu aamminsan yahay in shirkii Garowe ee labaad ay dhinacyo badani ka soo qeyb galeen. oo ay ku jireen kuwii hore iyo qaar Hiiraan iyo Jubbooyinka ka socda. Welina la sii kordhin doono.
1633 weriye ka socda Shabeelle ayaa weydiiyay su'aasha ku saabsan in Galmudug iyo Puntland oo keliya shirka laga qeyb geliyay. Ma aha ayuu yiri mid loo dhan yahay. Cabdiweli ayuu weydiiyay.
1632 David Cameron wuxuu sheegay in dano badan oo xagga ammaanka ah oo Soomaaliya ka jira ay saameyn ku yeelan karaan UK. Anigase waxaa si gooni ah ii taabtay ayuu yiri macluushii darnayn ee sannadkii hore ku dhufatay Soomaaliya.
1630 David Cameron, wuxuu ku tilmaamay in mustaqbalka dhow ay UK ka leedahay Soomaaliya in ay ka caawiso xagga aadminnimada. mustaqbalka dheerna, ujeeddo kale oo aan ka lahayn in aan xiriir wanaagsan iyo taageero la lahaanno Soomaaliya ma jirto ayuu yiri.
1629 Telefishinka Horn Cable ayaa su'aal weydiiyay. ku saabsan qorshaha UK.
1628 Raiisal Wasaaraha Soomaaliya waxaa uu sheegay in uu soo dhoweynayo in uu soo dhoweynayo in weerar cirka ah lagu qaado al Qaaciddada joogta Soomaaliya.
1628 David Cameron wuxuu hore u sheegay in loo baahan yahay in carruurta Soomaaliyeed ay qalin buugaag qaadato ee aanay qaadan qoryo.
1626 Ra'iisal Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali, waxaa la weydiiyay in uu taageerayo iyo in kale weerar xagga cirka ah oo lagu qaado al Shabaab.
16:25 Hadda waxaa la weydiinayaa su'aalo.
16:23 Waxaa uu ku tilmaamay in heshiiskii Garowe lagu gaary uu ahaa mid muhiim ah.
16:20 Waxaa hadlaya David Cameron, oo sheegay in la gaaray heshiis.
16:19 Waxaa hadda hadlaya madaxdii shirka ka qayb gashay oo su'aalo ka jawaabi doona.
16:15 Cameron wuxuu sheegay inkasta oo howl adag ayna hortaalo haddana dadka reer Muqdisho waxaan aragnay inay qabaan kalsooni badan, iyadoo magaalada ay bilaabanayso inay nololshii soo noqoto.
16:11 David Cameron oo shirka furay wuxuu sheegay in Al Shabaab waddanka oo dhan aysan haysan taageero, sababtoo ah waxay joojisay cuntadii dadka gargaarka lagu siinayay.
16:04 Shirka ayaa la soo gababeeyay,waxaa la sugaya Raiisal Wasaaraha Britain David Cameron inuu wax ka sheego wixii ka soo baxay shirka.
Saddex saacadood oo aan warbixintoodu halkan ku qornayn . lama oga wixii dhacay . waayo waa laga saaray dhamaan saxaafada goobta shirka . wakhtigaas
12:43 20-kii Bisha Wasiirka horumarinta caalamiga ah ee UK wuxuu la kulmay Soomaalida ku nool magaalada Bristol.
12:40 Xasan Maxamad Cosoble waxaa uu leeyahay Britain hadii doonaysa in la aamino waa inay soo celisaa dhulka Soomalida ee ay siisay waddamada deriska xilligii guumaysiga.
12:35 Cusman Xuseen Sayyid Cali oo Muqdisho joogo waxaa uu leeyahay waxa ka soo baxa shirka waan soo dhaweyanynaa hadii ay noqdaan wax wanaagsan.
12:29 William Hague ayaa shalay la kulmay madaxweynaha Somaliland. Britain ayaa ku bixin doonta 105M oo dollar gargaar horumarineed saddexda sano ee soo socota.
12:24 Britain in muddo ah ayay ku howlanayd la tashiga Soomaalida meel kasta oo ay joogaan.
12:18 Madaxwaynihii hore ee Galmudug, Danjire Maxamed Kemiko oo shirka ka faalooday wuxuu yiri "Annigu shirkan waxaan u arkaa mid muhiim ah oo goor loo baahan yahay yimid, dowlad weyn oo macna lehna ay isku shuqlisay, oo arrin aan weligeed dacin ah soomaliya. Dowladdo yar yar ayaan noloo dhiibayey IGAD iyo oo masaakiin iska ah, laakiinse dowlad xoog leh ayaa meesha soo gashay, waana filayaa in natiijadiisa in ay fiicnaan doonto."
12:16 Britain waxay filaysaa in shirka uu noqdo mid mowqif midaysan ay madaxda caalamku ka gaaraan arrimaha dalka Soomaaliya.
12:15 Fikrado kala duwan ayaa laga shirka London in uu keeni karo isbadal wayn oo ku yimaada xaaladda guud dalka Soomaaliya.
12:12 Kooxo kala duwan ayuu ra'iisl wasaaruhu sheegay in lagu soo daray dowladda ku meelgaarka ah.
12:10 Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali ayaa hadalka hadda qaatay.
12:08 William Hague ayaa hadlaya isagoo ka codsanaya madaxda in ay ku ekaan 3 daqiiqo marka waqti loo siiyo in ay hadlaan.
12:07 Somaliland iyo TFG waa in ay wadahadlaan buu yiri madaxwaynaha Ismaaciil Cumar Geelle.
12:05 Madaxwaynuhu wuxuu hadalka ku adkeeyay lagama maarmaannimada abuuritaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
12:04 Wuxuu sheegay ay laga maarmaan tahay in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo iyagu xilka la wareega, iyadoo si joogto ah aan loogu tiirsanaan karin.
12:03 Si xoog leh ayaa u taageeraynaa in la kordhiyo kaalmaynta AMISOM oo aan ka mid tahay ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle.
12:03 Waxaan halkan u joogaa in mowqif midaysan bulshada caalamku ay ka gaaraan arrimaha Soomaaliya.
12:01 Waxaa hadana hadalka la wareegay Ismaaciil Cumar Geelle, madaxwaynaha Djibouti.
11:58 Waxaan u baahan nahay abuuritaanka qorshe aan kula dagaalanno burcad badeedda oo dhibaato ku haya danaha dalalkeena oo dhan, ayuu yiri Wasiirka Dibedda Talyaaniga.
11:58 Waxaad toos halka ugala socotaan shirka London ee Soomaaliya. http://www.fco.gov.uk/en/global-issues/london-conference-somalia/
11:57 Waxaan taageeraynaa buu yiri oo dhiirigalinaynaa isku biiridda qaybaha Soomaalida iyo dowladda ku meelgaarka ah.
11:56 Wasiirka dibedda Talyaaniga Guiliomaria Terzi ayaa hadda hadlaya.
11:54 Mar walba waxaan garab taagnaanaynaa dalka Soomaaliya ayuu ku soo gababagabeeyay wasiirka dibedda Sacuudiga, Prince Sacuud al-Faysal.
11:51 Sacuudiga ayaa si xiriiris ah ugu jira qadka, wuxuuna ka hadlay kaalinta Sacuudigu ka qaatay wax ka qabshada arrimaha gargaarka Soomaaliya.
11:51 Saudi Arabia, wasiirka arrimaha dibedda Prince Saud Al Faisal.
11:50 Tallaabo deg deg ah ayaa loo baahan yahay buu yiri iyo mowqif midaysan oo laga qaato arrimaha dalka Soomaaliya ayuu ku soo gabagabeeyay Mwai Kipaki madaxwaynaha Kenya.
11:49 Wuxuu ugu baaqay dhamaan ka qaybgalayaasha shirka in si buuxda loo taageero nabad ku soo dabaalidda dalka Soomaaliya si hagar la'aan ah.
11:48 Kenya ma sii wado karto qaaditaanka culayska ayay mudada dheer dusha u ridatay ayuu sheegay, ayuu sheegay madaxwayne Kipaki.
11:47 Kenya shirkan waxay ka filaysaa in ay qorsheeyo sidii qaxootiga dib loogu celin lahaa dalkooda ayuu yiri Mwai Kipaki.
11:45 Waxaa uu sheegay in qaxootiga Soomaalida ay culays aad ah ku hayaan dowladda Kenya oo taagtooda ka badan tahay.
11:45 "Dhinaca burcad badeednimada waxaa ku celinaynaa
11:43 "Kenya waxay taageeraysaa go'aanka golaha ammaanka qaramada midoobay ee 2036", qaraarkan oo sare u qaaday tirada ciidamada midowga Africa ee dalka Soomaaliya jooga.
11:41 Waa in aan taageernaa sidii loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay ayuu yiri Mwai Kipaki.
11:41 Ciidamada Kenya ayuu sheegay in ay deegaano badan ka xoreeyeen kooxda al-Shabab, isla markaana ay ciidamada Kenya dhinteen falalka burcad badeeda.
11:39 Wuxuu sheegay in ay Kenya martigalisay shirkii 2004 ee dowladda lagu soo dhisay iyo in ay martigalinayso qaxootiga uu ku sheegay in ka badan nus million.
11:39 Wuxuu ugu baaqay dowladaha horay ciidamada u ballanqaaday in ay ballantooda ka soo baxaan ayuu yiri madaxwaynaha Kenya.
11:38 Wuxuu u mahadceliyay Uganda iyo Burundi oo naftooda u huriyay iyo Djibouti oo ku biirtay.
11:38 Shirku wuxuu dhacayaa xilli aad muhiim u ah ayuu yiri Mwai Kipaki.
11:37 Madaxwaynaha Kenya Mwai Kipaki ayaa hadalka qabsday.
11:36 Si buuxda ayaanu taageeraynaa shirka ayuu yiri wasiirka dibedda Faransiiska.
11:35 77 million oo doolar ayaa EU ugu deeqday Soomaaliya, Faransiiskana wuxuu ku deeqay ilaa 30 million oo wax looga qabanayay arrimaha bini'aadaminimada.
11:31 Wasiirka dibedda Faransiiska Allan Juppe ayaa hadda hadalka ku wareegay, isagoo xusay arrimo ay ka mid yihiin in isbadallo ka socdaan Soomaaliya.
11:30 Shir guddoonka shirka waxaa qabtay xoghayaha dibedda William Hague kadib markii uu baxay ra'iisul wasaare David Cameron.
11:30 Meles Zenawi
11:29 Meles Zenawi wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in al-Shabab tallaabo xoog leh laga qaado.
11:28 "al-Shabab waa urur argagixiso." Melew Zenawi.
11:27 Isbadallo xoog leh ayaa ka dhacaya dalka Soomaaliya ayuu yiri Meles Zenawi.
11:26 Tobanaan kun oo dadwaynaha Baydhaba ayuu sheegay in ay ciidamada ku soo dhoweeyeen magaalada Baydhaba.
11:25 Shalay ciidamada TFT iyo ethiopia ayaa ka adkaaday oo ka saaray al-Shabab magaalada Baydhaba oo ay saldhig wayn ku lahaayeen ayuu yiri Meles Zenawi.
11:24 Wuxuu ka hadlay go'aanka golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ciidamada lagu kordhiyay.
11:23 Wuxuu sheegay in Garowe 2 uu yahay guul wayn maadaama uu u ogolaanayo dhamaan kooxaha Soomaalida in ay si wax ku ool ah ay waxu dhistaan ayuu yiri Meles Zenawi.
11:22 Meles Zenawi ayaa ku wareegay hadalka.
11:21 Dhamaan waxaan idinku soo dhowaynaynaa buu yiri magaalada Istanbul si aan go'aanno kuwan ka cad cad u gaarno ayuu ku soo gabagabeeyay Ahmet Davutoglu.
11:19 Wadaxaajood qaran ayaa lagama maarmaan u ah nabad ku soo dabaalidda dalka Soomaaliya, kooxaha Soomaalidana waa in ay taas ka wada shaqeeyaan ayuu yiri wasiirka dibedda Turkiga.
11:18 Diyaar ayay u tahay buu yiri Turkiga in ay taageerto Amisom. Ciidan Soomaaliyeed oo ku salaysan madaxbanaanida Soomaalida ayaa loo baahan yahay buu yiri Ahmet Davutoglu.
11;17 Ilaa 300 million oo doolar ayuu sheegay in Turkigu uu u qoondeeyo horumarinta Soomaaliya.
11:17 Wuxuu ku dheeraaday waxqabadka Turkiga ee Soomaalida, wax ka qabashada arrimaha bini'aadaminimad iyo in ay ka shaqaynayaan horumarinta garoonka diyaaradaha.
11:15 Wasiirka dibedda Turkiga Ahmet Davutoglu ayaa hadlaya ee ma aha ra'iisul wasaaraha sidaa horay u sheegnay.
11:14 Turkiga ayuu sheegay in bisha June 2012 uu Turkigu martigalin doono shirka Soomaaliya looga hadlayo oo kan daba socda.
11:13 Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa hadda hadalka qaatay.
11:12 Ra'iisul wasaaraha Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber bin Muhammad Al Thani, Wuxuu u mahadceliyay abaabulayaasha shirka.
11:10 Waxay taasi abuuraysaa buur yiri in burcadda lala dagaalammo iyo in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Qatar.
11:09 Waxaa loo baahan yahay sida uu sheegay madaxwaynaha Soomaaliya waxaa loo baahan yahay ciidamo dhinaca badda ah oo Soomaaliya ay yeelato, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Qatar.
11:07 Soomaalida oo kaliya ayaa garan karta xalka dhabta ah ee dhibaatada haysata dalka Soomaaliya.
11:06 Ra'iisul wasaaraha Qatar ayaa hadda hadalka la wareegay.
11:05 Waxaan taageeraynaa dowladda demoqraadiyad ku dhisan oo Soomaaliya ka saarta dhibaatada ay mudada dheer ku soo jirtay ayay sheegtay Hillary Clinton.
11:04 Waxaa raadinaynaa diblomaasiyad ahaan in aan goobjoog ka noqono Soomaaliya ayay tiri Hillary Clinton.
11:03 Abuuriadda shaqooyinka iyo dhinaca horumarinta ayay sheegtay in uu Maraykanku ka caawin doono dowladaha iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ayay tiri Hillary Clinton.
11:02 Maraykanka wuxuu taageerayaa dhamaan cid kasta oo cambaaraysa hogaanka iyo falalka al-Shabab, ayay tiri Hillary Clinton.
11:00 Al-Shabab iyo Al-Qaeda waa ay sii dafiiceen taas ayaa keentay in ay isku biiraan. al-Shabab iyo al-Qaeda waa wax laga soo gudbay ayay tiri Hillary Clinton.
11:00 Hillary Clinton ayaa sheegtay in al-Shabab ay halis ku tahay amniga oo dadka rayidka ah cadaadis xoog leh ku hayso. al-Shabab ayay ku eedeysay in gaajo u dishay caruurta.
10:59 Cunaqabatayn ayay sheegtay noocyo kala duwan ah qof kasta oo ay ku jiraan madaxda dowladda ku meelgaarka ah ee isku dayda in ay hor istaagto isbdalka.
10:57 Waxay sheegtay in bulshada caalamku aysan aqbalayn in la kordhiyo xilliga ku meelgaarka ah ee dowladda ku meelgaarka ah ee ku eg August.
10:57 "Dowladda ku meelgaarka mar walba waxay ahayd ku meel gaar in lagu gaaro dowlad joogto ah." Hilary Clinton.
10:56 Waa in gacan laga gaystaa bay tiri sidii Soomaaliya horay loogu marin lahaa iyadoo bisha August uu dhacayo xilligii ku meelgaarka.
10:55 Hilary Clinton, xoghayaha arrimaha dibedda Marayakanka, ayaa hadalka ku wareegtay.
10:54 Yuweri Museveni.
10:52 Dadka Soomaalida ee gaajaysan waa in ay helaan gargaar.
10:51 "Kooxaysiga waxaa xoojiyay maqnaashaha dheer ee dowlad dhexe." Yuweri Museveni.
10:50 Wuxuu ka hadlay in kala qoqobka uusan wanaagsanayn, isagoo tusaale u soo qaatay sida qabiilkiisa uu saboolnimada uga baxay markii qabaa'ilka kale ka iibsadeen wax soo saarkooda.
10:48 "Waqtigii loo baahnaa ayuu shirkan ku soo beegmay." Yuweri Museveni.
10:48 Wuxuu xusay dalalka ay ciidamada Africa guulaha ka dhaliyeen.
10:46 "meelaha Africa looga dambeeyo natiijo ayaa ka soo baxda." Yuweri Museveni.
10:45 Madaxwaynaha Uganda, Yuweri Museveni ayaa hadda hadalka qaatay.
10:43 Waa in la ilaaliyaa buu yiri madaxwayne Shariif shuruucda dalka Soomaaliya.
10:40 Burcad badeednimada Soomaaliya sidii loo baahnaa looma daraasadayn ayuu yiri madaxwayne Shariif.
10:39 Lifaaqan ka aqriso Soomaalida dadka matalaya:http://www.bbc.co.uk/somali/war/2012/02/120214_kaqeybgalka.shtml
10:38 Cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya ayuu madaxwayne Shariif sheegay in laga qaado Soomaaliya in loo baahan yahay.
10:37 Ciidamada amniga Soomaaliya waa in la xoojiyaa oo la maalgaliyaa.
10:37 Wuxuu tiriyay qodobo dhowr ah oo uu sheegay in uu ku talinayo.
10:35 Waa in la sii wadaa buu yiri taageerada dowladda si ay u samayso xukuumadda looga bixi karo xilliga ku meelgaarka ah.
10:33 Go'aanno bulshada caalamku gaartay ayuu sheegay madaxwayne Shariif in aan laga soo bixin.
10:30 Wuxuu madaxwaynaha taxay waxqabadka dowladda ku meelgaarka ah oo uu ku jiray shirkii Garowe iyo go'aanadii ka soo baxay oo uu xusay.
10:29 Dadka Soomaaliya oo dhan ayuu yiri deegaanadeeda iyo maamulada jira waxay isku raacsan yihiin arrimaha soo celinta amniga, la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta adeegyada bulshada.
10:28 Wuxuu sheegay in rajo laga qabo shirkan.
10:27 Wuxuu kaloo madaxwayne Shariif ammaanay dhamaan madaxda isku soo howshay ka qaybgalka kullanka.
10:26 Wuxuu u mahadceliyay dowladda Britain.
10:26 Madaxwayne Sheekh Shariif ayaa hadda bilaabay in uu ku hadlo luqadda carabiga.
10:25 Wuxuu kaloo aad u ammaanay dowladda Britain.
10:24 Wuxuu u mahadceliyay dalalka deriska ah ee Soomaaliya iyo IGAD sida ay gacan uga gaysanayaan xal u helidda xaaladda dalka Soomaaliya.
10:21 "Muqdisho waxay ka wayn tahay caasimadda, waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliya." Ban Ki Moon.
10:20 "In ka badan laba million oo Soomaali ah ayaa wali ku sugan saboonimo." Ban Ki Moon.
10:19 "146 badmaax ayaa burcad badeeddu haysataa oo intooda badan ka socda dalalka horumaray." Ban Ki Moon.
10:18 "Ciidamada Soomaalida ee ka dhinac dagaalamaya AMISOM waxay iyaguna u baahan yihiin caawinaad." Ban Ki Moon.
10:17 "Waxaan ku baaqaya in la qaado tallaabooyin lagu hagaajinayo ammaanka." Ban Ki Moon.
10:16 Ban Ki Moon, Xoghayaha Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa hadda hadlaya
10:15 Dadka Soomaalida ayuu ugu baaqay in ay wadankooda dib u hantaan.
10:14 Wuxuu sheegay in la samayn doono guddiga maamulaha dhaqaalaha gala dowladda ku meelgaarka ah si meesha looga saaro musuqmaasuqa.
10:14 "Guusha qorshaha siyaasadda waxay ku xiran tahay is aaminaad."
10:12 "waxaan ku faraxsanahay in ay maanta nala joogaan dhamaan madaxda qaybaha Soomaalida." Cameron.
10:11 "Waxaan u baahan nahay in aan Soomaaliya ka caawinno in ay gacaheeda isku taagto." David Cameron.
10:10 Burcad badeedda ayuu sheegay in Mauritius iyo Seychelles ay ogolaadeen in ay maxkamadeeyaan burcadeeda, Somalilandna ogolaatay in ay xabisto burcadda la xukumo.
10:09 Wuxuu ammaanay Golaha Ammaanka ee QM oo kordhiyay tirada ciidamada amniga.
10:08 Wuxuu ka hadlay amniga oo uu sheegay in dhinaca amniga la xoojiyo ciidamada midowga africa.
10:07 "Dhibaatada Soomaaliya oo kaliya Soomaalida ayaa xalin karta." Cameron.
10:07 "Al-Shabaab waxay luminaysaa taageerada bulshada Soomaaliyeed." David Cameron.
10:06 "Fursad wayn ayaa hadda haysannaa." David Cameron.
10:06 "Hadaan iska fadhinno.. hadhow ayaanu ka shalaayaynaa."
10:04 "Dhibaatada Soomaaliya oo kaliya ma saamaynayso ee kulli way na saamaynaysaa"
10:04 Shirka ayaa furmaya, waxaana hadlayay ra'iisul wasaaraha Britian, David Cameron.
10:03 Madaxda ergooyinka oo dhan, oo ay ku jiraan madaxda hogaaminaysa wufuudda kala duwan ee Soomaalida waxaa kursi laga siiyay oo ay fadhiyaan safka hore ee miiska.
10:02 Hilary Clinton waxay dul taagan tahay Madaxwaynaha Kenya Kipaki oo isagoo fadhiyay la sheekaysanaya.
10:01 Ban Ki Moon ayaa gudaha miiska galay oo mid mid u salaamaya dadka.
09:59 Siilaanyo waxaa la fariisiyay safka hore ee miiska iyadoo hortiisana ay ugu qornayd Somaliland.
09:57 Madaxwayne Siilaanyo wuxuu salaamay Ban Ki Moon iyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Qatar.
09:56 Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Meles Zenawi ayay shirka isku salaameen.
09:54 Wakiil xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Augustine Mahiga, kullanka ayuu ku sugan yahay.
09:51 kullan goor dhow ayuu furmayaa.
09:50 Xoghayaha dibedda Maraykanka, Hilary Clinton, ayaa hadda gashay shirka.
09:50 Madax isugu jirta madaxwaynayaal, raiisul wasaarayaal, wasiirro iyo Ururo caalami ah ayaa galaya hadda shirka.
9:46 Madaxda shirka ka qaybgalaysa ayaa si isdaba joog ah hadda u imaanaysa, waxaa imaaday dhamaan madaxda Soomaalida.
09:43 Wakiilaka sare ee Midowga Yurub ugu qaabilsan arrimaha dibadda iyo ammmaanka Catherine Ashton ayaa shirka ka qaybgalaysa.
09:37 Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Japan Mr Ryuji Yamane ayaa yimid shirka.
09:34 David Cameron ayaa martigalinaya shirka. wuxuu filayaa in go'aanno dhaxalgal ah ay ka soo bixi doonaan.
09:33 Ra'iisul wasaaraha Britain, David Cameron ayaa hadda galay xarunta shirka.
09:32 Shariif Xassan Sheekh Aadan, ayaa hadda galay isaguna xarunta shirka
09:31 Guddoomiyaha AU Jean Ping ayaa hadda galay xarunta shirka
09:31 Madaxwayne Caalin ee Galmudug ayaa dib ugu soo laabtay shirka.
09:31 Xoghayaha guud ee Ururka Islaamka ayaa goor dhow galay xarunta shirka.
09:30 Duqa magaalada Muqdisho ayaa siaguna hadda galay xarunta shirka.
09:30 Ciidamada ugu ballaaran ee AMISOM waxay ka socdaan dalka Uganda.
09:29 Madaxwaynaha Uganda, Yuweri Museveni, ayaa hadda ayuu galay xarunta shirka.
09:27 Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki Moon, hadda ayuu galay xarunta shirka.
09:26 Madaxda Soomaalida waxay saaka kullan quraac ah la lahaayeen ra'iisul wasaaraha Britain, David Cameron.
09:26 Madaxwaynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa isaguna hadda galay shirka.
09:25 Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali, hadda ayuu dib ugu soo laabtay shirka.
09:24 Dalka Mauritius wuxuu ka mid yahay dalalka ogolaaday in maxkamad lagu saari karo burcad badeeda dalkooda.
09:20 Ra'iisul Wasaaraha Mauritius, Dr Navinchandra Ramgoolam goor dhow ayuu galay xarunta shirka.
09:17 Shirka London ayaa filayaa in khudbadaha madaxdu ay bilowdaan goor dhow.
09:16 Somaliland wali ma helin aqoonsi rasmi ah. UK waxay sheegtay in qibradda Somaliland ee dhinaca dhisidda nabadda laga faa'iidaysan doono.
09:15 Madaxwaynaha Somaliland, Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa hadda isaguna galay xarunta shirka.
09:13 Madaxwaynaha dalka Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete hadda ayuu galay xarunta shirka.
09:11 Nigeria horay ayaa ciidamo ka mid noqda kuwa AMISOM ee Soomaaliya jooga lagaga dalbaday. Balse wali ciidamo kama joogaan.
09:10 Madaxwaynaha dalka Nigeria, Jonathan Goodluck ayaa hadda isaguna galay xarunta shirka ee Lancaster House.
09:08 Kenya waxay sheegtay in ciidankeedu ay u galeen si ay tallaabo uga qaadaan al-Shabaab oo lagu eedeeyay falal argagixiso ay ka fuliyeen gudaha Kenya.
09:08 Ciidamada dalka Kenya ayaa galay Soomaaliya bishii October,2011.
09:07 Madaxwaynaha dalka Kenya, Mwai Kipaki ayaa hadda galaya xarunta shirka Lancaster House.
09:04 Ciidamada AMISOM waxay hadda gaaraya ilaa 12 kun, balse Golaha Ammaanka wuxuu u codeeyay in ugu badnaan la gaarsiiyo 17,731.
09:02 Ciidamada dalka Burundi waxay ka mid yihiin xoogaga ku jira ciidamada AMISOM ee la dagaalamaya al-Shabaab.
09:01 Madaxwaynaha dalka Burundi, Pierre Nkurunziza hadda ayuu galay xarunta shirka.
09:00 Boqolaal ciidamada Djibouti ah ayaa ku sugan Muqdisho oo ka mid ah ciidamada AMISOM ee Muqdisho ku sugan.
08:59 Madaxwayanha Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle, hadda ayuu galay Lancaster House.
08:58 Ciidamada Ethiopia waxay shalay qabsadeen magaalada Baydhaba.
08:58 Ra'isul Wasaare Meles Zenawi hadda ayuu galay xarunta shirka.
08:55 Wasiirka dibedda Koonfurta Africa Ms Maite Nkoana Mashabane, hadda ayay gashay xarunta shirka.
08:50 Madaxwaynaha Seychelles, James Michel, goor dhow ayuu galay xarunta shirku ka dhacayo.
08:47 Calamada UK iyo kan Soomaaliya ayaa la is dhinac suray waddada Maka al-Mukarrama.
08:44 Duqa magaalada Muqdisho, Maxamed Axmed Nuur wuxuu ka mid yahay xubnaha shirka lagu casuumay.
08:31 Muqdisho waxay hoy u tahay kumanaan barakacayaal ah oo dagaalo iyo abaaro uga soo cararay guryahoodii.
08:28 Magaalada Muqdisho calamada dalka Britain ayaa daafaha waddooyinka lagu taxay.
08:26 Wasiirka UK ee Africa, Henry Bellingham iyo Wasiirka Horumarinta Caalamiga ah, Stephen O'Brien, ayaa soo dhowaynaya ergooyinka marka ay galayaan xarunka kulanka.
08:24 Madax ka socota Europe ayaa ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka.
08:23 Wakiilo ka socda in ka badan konton dal madaxdooda iyo wasiiradooda arrimaha dibedda iyo wakiilada ururo caalami ah.
08:22 Dalka Turkigu wuxuu ka mid yahay dalalka kulanka lagu casuumay.
08:21 Wasiirka arrimaha dibedda Turkiga, Ahmet Davutoglu goobta kulanka ayuu hadda ka sii baxay.
08:15 Shirka oo furitaankiisa rasmiga ah goor dhow dhici doono, waxaa hadda laga wadahadlayaa arrimaha aadminimada.
08:08 Dhamaan madaxda ergooyinka Soomaalida ee ka qaybgalaya shirku waxay kulan quraac ah la leeyihiin Ra'iisul Wasaaraha Britain, David Cameron.
08:07 Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya goobta ayuu gaaray, hadda ayuu ka baxay goobta shirka.
08:06 Si isdaba joog ah ayaa hadda madaxdu u soo galayaa xarunta shirka.
08:05 Wakiilka AU ee Soomaaliya Jerry Rowlings ayaa hadda gaaray xarunta kulanka ee Lancaster House.
07:57 Madaxda UK in muddo ah ayay ku howlanayd la tashiga ku aadan shirka iyo go'aanada lagu wado in ay ka soo baxaan waxa ay noqon karaan.
07:54 Madaxda waxaa la filayaa in ay ka soo saaraan shirka war murtiyeed xusi doona tallaabooyinka la qaadi doono.
07:53 ...Khibradda Somaliland lagaga kororsan karo dhinaca dhisidda nabadda ee gobolka.
07:52 Madaxwaynaha Somaliland ayaa ka qaybgali doona shirka. Xafiiska dibedda Britain wuxuu sheegay in...
07:50 ...Puntland, Galmudud, Ahlu Sunna Wal Jamaaca.
07:49 Soomaalida waxaa shirka lagu casuumay hogaamiyayaasha dowladda ku meelgaarka ah, Duqa magaalada Muqdisho iyo...
07:47 Waxaa kaloo ka mid ah ururo caalami sida Bankiga adduunka, IGAD, Ururka Islaamka iyo Jaamacadda Carabta.
07:44 Waxaa kulanka ka qaybgalaya dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda, Maraykanka, Turkey, UAE, Sweden, AU, UN...
07:41 ...Burcad badeeda, biniaadaminimada iyo xiriirka caalamiga ah.
07:39 Wuxuu shirku diiradda saarayaa arrimaha Burcad badeeda, qorshaha siyaasadda, xasiloonida gudaha, la dagaalanka argagixisada...
07:34 Waxaa Golaha ammaanku ogolaaday in ilaa 17,731 ugu badnaan la gaarsiiyo halka ay hadda yihiin ilaa 12 kun.
07:33 Shirka London wuxuu furmayaa iyadoo shalay Golaha ammaanka qarmada midoobay uu ansixiyay kordhinta ciidamada AMISOM.
07:31 Madaxwaynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa goor dhow galay xarunta Kullanku ka dhacayo.
07:28 Ilaa 9:30 ayaa lagu wadaa in ay bilowdaan khudbadaha madaxda.
07:27 Waxaa furmaya shirka looga hadlayo arrimaha bini'aadaminimada ka hor khudbadaha madaxda.
07:26 Kullanku wuxuu furmayaa 9:00 subaxnimo xilliga London.
07:23 Duqa Magaalada Muqdisho, Maxamed Axmed Nuur (Tarsan) ayaa ka mid mas'uuliyiinta gaarka loo casuumay.
07:22 Madaxwaynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay.
07:16 arrimaha amniga ka hortagga argagixisada, xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimaha bini'aadaminimada.
07:14 Waxaa ka mid burcad badeedda sidii wax looga qaban lahaa, waxaa la wadaa in saldhig lagu xiro oo wayn laga furo dalka Seychelles.
07:12 Shirka waxaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa arrimo dhowr ah.
07:10 Waa shirkii ugu waynaa in muddo oo Soomaaliya loo qabto.
07:06 Madaxda ayaa ku sii qulqulaysay xarunta shirka oo la filayo in uu si rasmi ah u furmo
07:04 In ka badan konton dal ayaa ka qaygalaya shirka London oo uu martigalinayo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron.
07:02 Goor ayuu furmayaa shirka London oo ka dhacaya daarta Lancaster House ee ku taalla bartamaha Londno
Shirka London toos uga daawo bartan internetka. Waxaad bartan ka heli doontaa video toos uga imaanaya qolka shirku ka dhacayo ee Lancaster House iyo weliba warbixnno qoraal ah oo toos ah.
posted on Thursday, February 23rd, 12